भारतमा ब्रिटिस हुँदा निकालेको नक्सा बीबीसीले बाहिर ल्याएपछि विश्वभरी त’रंग्ग , मोदी त’नाबमा! - Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारतमा ब्रिटिस हुँदा निकालेको नक्सा बीबीसीले बाहिर ल्याएपछि विश्वभरी त’रंग्ग , मोदी त’नाबमा!
बिबिसी। भारतले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र राखेपछि नेपालभित्र त्यसको व्यापक वि’रोध भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी “कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ” भनेको छ। त्यसको प्रतिक्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीवार दिल्लीमा बोल्दै उक्त नक्साले भारतको सार्वभौम सी’मा निर्धारण गरेको तर्क गर्दै “नयाँ नक्साले कहीँ कतै पनि नेपालसँगको सी’मा परिमार्जन नगरेको” दा’बी गरे।
नेपालसँगको सी’मा निर्धारणको काम वर्तमान संयन्त्रअन्तर्गत चलिरहेको भन्दै रवीश कुमारले द्वि’पक्षीय घ’निष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार संवादमार्फत् समाधान खोज्ने भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। तर नेपाली विज्ञहरू कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र भारतले बलमिच्याइँ गरेको बताउँछन्। यसै प्रसङ्गमा नेपालको नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग बीबीसी नेपालीले कुराकानी गरेको छ। नेपाल र भारतको सी’मा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्छ।
सुगौली सन्धिको मर्म र त्यसलगत्तै बनेका नक्साहरूले के भन्छन् भन्ने कुराको आधारमा नेपाल र भारतका सीमा वि’वादहरू निरूपण हुनुपर्छ। त्यसबारे बलिया प्रमाणहरू हुँदा पनि नेपालकै कू’टनी’तिक कमजोरीका कारण कालापानी क्षेत्रमा नेपालको झन्डै ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतको नक्सामा परेको छ। सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदीको कुरा उल्लेख छ।
त्यस धारामा नेपालका राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदीपारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउनेछैनन् भनेपछि नेपालको पश्चिमी सी’मा काली नदी भएको हो। महाकाली नदी कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा गढवाल-कुमाऊँ नाम दिएर एउटा नक्सा बनाएको छ। त्यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ।
तनहुँमा बस दु र्घटना : दुईको मृ त्यु, १७ जना घा इ ते
टीकाको दिन सेनाको बसले निःशुल्क यात्रु बोक्ने
चिनियाँ पर्यटक बोकेको गाडी दु र्घटनामा दुई जनाको मृ त्यु (अपडेट)